बलिउड: पहिलोपटक इतिहासमा आम्दानी शून्य
बलिउड बलिउड: पहिलोपटक इतिहासमा आम्दानी शून्य
आईतबार, असार १४, २०७७ | सन् २०२० मा जुनसम्म ५० चलचित्र प्रदर्शनमा आएको छ। इतिहासमा बलिउड चलचित्र पहिलोपटक बक्सअफिस कलेक्सन शून्य भयो, चलचित्र क्षेत्रमा कोभिड-१९ महामारी र लकडाउनका कारण त्यत्तिकै संकटमा परेको छ।
सिनेमा हलमा कोभिड-१९ कारण ताला लागेको तीन महीनाभन्दा बढी भयो | १९ मार्चदेखि बलिउडमा सुटिङ बन्द छ।
लकडाउनपछिको अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गर्दा चलचित्रको छायांकन पनि शुरू हुन लागेको छ भने चलचित्र प्रदर्शनका लागि पनि मितिहरु तोकिन थालेका छन्। सामाजिक दूरी कायम गर्दै बलिउडलाई चलायमान राख्‍न चलचित्र अधिकारीहरूले निर्णय गरेका छन्।
२०२० मा रिलिज भएका ५० फिल्ममा दुई फिल्मले १०० करोड आकँडा पार गरेका छन्।
१० जनवरीमा प्रदर्शनमा आएको तान्हाजीले १०० करोड पार गरेको थियो। तान्हाजीको कूल कमाई ३६७.६५ करोड थियो। त्यस्तै टाइगर श्राँफको बागी ३ ले १३७.०५ करोड कमाई गरेको थियो।
लकडाउन हुनुअघि हलमा ३५ चलचित्र प्रदर्शनमा आएका थिए। पहिलो पटक हलबाहिर चलचित्र प्रदर्शनमा ल्याइयो। अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुरानाको गुलाबो सिताबोलाई १२ जुनमा अमेजन प्राइममा रिलिज गरिएको थियो।
इरफान खान, ऋषी कपूर, योगेश गौर, अनवर सागर, बसु चटर्जी, मोहित बघेल, वाजिद खान, प्रेक्षा मेहता, मनमीत ग्रेवाल, चिरंजीवी सरजा लगायतका सेलिब्रेटीहरूको लकडाउनका बीच बिदाई गरिएको थियो।
बलिउडले २०२० को पछिल्लो तीन महिना गतिविधि नै शून्य बनेको थियो। यो बीचमा थुप्रै आरोहअवरोहको सामना गर्नुपर्‍यो।
सुशान्तसिंह राजपूतको आत्महत्यापछि बलिउडमा चलचित्र माफिया तथा नेपोटिज्मले चर्चा पाएको छ।
भारती र उनका श्रीमानको बारेमा अदालतले आज दियो यस्तो फैसला ?
कविता - November 24, 2020 0
बलिउड क’मे’डी कलाकार भारती सिंह र उनका पति हर्षको जमानत अदालतले स्वीकार गरकेो छ । उनीहरु सोमवार जमानतमा छुटेका छन् ।
संसारको सबैभन्दा म’हँगो ब्याग सार्वजनिक, मूल्य ८३ क’रोड
कविता - November 29, 2020 0
इटलीको एउटा लग्जरी ब्रान्डले संसारको सबैभन्दा म’हँगो ब्याग तयार गरेको छ । यो ब्यागलाई कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको छ । यो ब्यागको मूल्य ५.३ मिलियन पाउन्ड (८३ क’रोड रुपैयाँ) हो ।
को हुन् यी गुडिया जस्तै देखिने २६ वर्षिया सुन्दरी ? [फोटो फिचर]
सुन्दर देखिन कसलाई रहर हुन्न र तर एक युवतीलाई धेरै सुन्दरी भएको कारण घरभित्र बस्न बाध्य पारिएको छ । रुसकी २६ वर्षीया एंजेलिका कीनोवा एक अनुभवी मोडल हुन् । उनी हेर्दा नै गुडिया जस्ती देखिन्छन् ।
दुर्घटनामा मृ'त्यु भएकाहरुको लाश कुकुरको पहुँचमा भएको खुलेको छ । भारत, उत्तर प्रदेशको सरकारी अस्पतालबाट यस्तै एक भिडियो बाहिर आएको छ ।
एकपटक पढ्नुस आनन्द आउने छ “उनीसँग बिताएको दुई रात”, ज’नचे’तनाको लागि...